Guurso ama khasab ku bixi ganaax canshuur ah | STN Somali
Home Caalamka Guurso ama khasab ku bixi ganaax canshuur ah
Guurso ama khasab ku bixi ganaax canshuur ah
Waxay noqotay soojeedintii wadaadka Iiraaniyaan-ka ah ee ku aadaneyd in guurka laga dhigo mid khasab ah isla markaana canshuur lagu soo roga kuwa aan dooneynin in qoys unkaan, mowduuc dood ballaaran ee ka dhex dhaliyey dadka isticmaalo warbaahinta bulshada, waxayna sidoo kale dhalisay maad iyo kaftan.
“Waxaa usoo bandhigi barlamaanka iyo maamulada dalka oo dhan sharci cusub oo dhiiri-galiyo guurka” ayuu uyiri Sheekha oo lagu magacaaba Maxamed Idriis.
Wuxuu leeyahay guurku waa inuu noqdaa mid khasab ah, isagoo ku baaqaya in khasab looga dhigo kuwa gaaray da’da 28 sano ee aan weli guursan.
Mid kamid Iiraaniyiinta ayaa bartiisa Twitterka waxuu ku soo qoray : ” waxaan gudbay xiligii aan guursan lahaa hal sano, hal bil iyo 12 maalmood,” isagoo tixraacaya da’dii 28-da ee uu ku baaqay sheekh in looga dhigo khasab kuwa dib u dhiga guurka.
Mid kale ayaa tiri, waxaa u qalmaa abaalmarin wayn, sida in baabuur ama guri la I siiyo, maxaa yeelay waxay guursaday markii aan jiray 18 sano, taas oo ka dhigan inaan guursaday 10 sano ka hor inta aan gaarin da’dii uu soo jeediyey sheekha in aan laga dib marin.
“Waxaan ka baqaa in gabdhaha lagu khasbo inay dhalaan carruur ka hor inta aysan gaarin da’da 30-sano,” mid kale oo walaac ka muujineyso soo-jeedinta uu sheekha Idriis u gudbin doono baarlamaanka ayaa sidaas tiri.
Mas’uuliyiinta ugu sareyso wadanka Iiraan ee uu ugu horeeyo Cali Khameyne ayaa sidoo kale qabo in ay lagama-maarmaan ay u tahay muwaaddiniinta inay guursadaan oo carruur yeeshaan.
Wasiirka Arimaha Gudaha Iiraan Cabdil Rida Rahmani Fadli ayaa Axadii sheegay in baaritaanada la sameeyay ay muujinayaan in tillaabooyinka la qaaday si kor loogu qaado heerka dhalmada ee dalka aysan aheyn mid kaafi ah.
Dhalinyarada Iiraaniyiinta ah ayaa ka caga jiidaya inay guursadaan iyadoo ay ku kalifeyso taas caqabada dhaqaale ee dalka ka jiro, taasoo ka dhigtay sameynta qoys riyo aysan dad badani gaari karin.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira muwaadiniin doorbida is-kaaabulanimada, halka kuwo kalena ay doortaan inay la noolaadaan lammaanahooda iyaga oo aan si rasmi ah u guursan.
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ganaaxa ah ee uu wadaadku soo jeediyey in lagu qaado kuwa aan guursan kadib markay gaaraan da’da 28 sano, in lagu qasbo inay bixiyaan canshuur u dhiganta rubuc ka mid ah dakhliga soo gala, iyadoo la siinaayo lacagahaas kuwa doonaya inay guursadaan laakiin saboolnimada ay ka hortagan tahay taas.
Waxuu sidoo kale soo jeediyay in dadka aan guursan loo diido jagooyinka maamuleed ee sare, macalinimada iyo xilalka kale ee muhiimka ah.
Dhanka kale, waxuu soo jeediyey in la siiyo dhiirrigelinno badan oo taxane kuwa doorta inay guursadaan, oo ay ka mid tahay in mudnaanta manfacyada shaqaaleysiin la siiyo iyaga.
Previous articleDaraasad muujisay in Ragga “bidaarta leh” ay aad ugu nugul yihiin u dhimashada Koroona
Next articleMaleeshiyaad Ku Dagaalamay Gobolka Hiiraan oo lakaala Dhexgalay